I-Isoproterenol HCL emfutshane (949-36-0) HPLC≥98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Isoproterenol HCL (949-36-0)
SKU: 949-36-0. Udidi: abanye
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Isoproterenol HCL (i-CAS 180288-69-1), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Isoproterenol hydrochloride powder I-3,4-Dihydroxy-α - [(isopropylamino) i-methyl] i-benzyl alcohol hydrochloride, i-amine sympathomimetic amine ehambelana ne-epinephrine kodwa yenza ngokuthe ngqo kwi-beta receptors.
Isoproterenol HCL yevidiyo
Isoproterenol HCL ezisisiseko zabalinganiswa
igama: Isoproterenol HCL
I-molecular Formula: C11H18ClNO3
Isisindo somzimba: 247.72
Ukusetyenziswa kwe-Isoproterenol HCL (949-36-0) kumjikelezo
I-Isoproterenol Hydrochloride yindlela ye-hydrochloride yetyuwa ye-isoproterenol, i-synthetic catechol kunye ne-beta adrenergic agonist nge-peripheral vasodilator, i-bronchodilator, kunye nepropati ezikhuthaza iipropati. I-Isoproterenol inegalelo layo kwi-beta-1 recerenor receptors kwi-myocardium, ngaloo ndlela kwandisa izinga lentliziyo kunye nokuphuma kwenhliziyo. Ukongeza, izenzo ze-isoproterenol kwi-beta-2 i-adrenergic receptors kwi-bronchiolar kunye ne-muscular smooth muscle, okwenza kubangele ukuphumula kwemizimba.
Isopropyl analog ye-EPINEPHRINE; i-beta-sympathomimetic eyenza intliziyo, i-bronchi, i-muscle muscle, i-feedary tract, njl. I-Isoproterenol hydrochloride isetyenziswe ngokuyinhloko njenge-bronchodilator kunye nentliziyo evuselelayo.
I-isoproterenol hydrochloride injection, ngokunyusa iimfuno ze-oksijeni ze-myocardial ngelixa ukunciphisa i-coronary perfusion esebenzayo, kunokuba nefuthe elonakalisayo kwintliziyo eyingozi okanye engaphumeleliyo. Uninzi lweengcali zidikibala ukusetyenziswa kwayo njenge-agent yokuqala ekuphazamiseni ukukhathazeka kwemizimba emva kwe-infyoction ye-myocardial. Nangona kunjalo, xa uxinzelelo oluphantsi lwe-arterial luphakanyiswe ngenye indlela, i-isoproterenol hydrochloride injection ingavelisa i-hemodynamic nemiphumo emihle.
Kwizigulana ezimbalwa, mhlawumbi ngezifo eziphilayo ze-AV node kunye namasebe awo, i-Isoproterenol HCL (i-CAS 949-36-0) injini iye yaxelwa ukuba ibe yintlupheko yesithintelo senhliziyo okanye ukukhusela i-Adams- Stokes ekuhlaseleni kwisigqi sesimo esivamile okanye intliziyo ephilileyo ibhloko.
-Isoproterenol hydrochloride esetyenziselwa
Ukusetyenziswa kwonyango lwe-block block kunye ne-Adams-Stokes attack. Kwakhona isetyenziselwe unyango lwama-arhythmias e-ventricular kwinqanaba le-AV kunye ne-carotid sinus hypersensitivity.a Nangona kunjalo, ubungqina obuxhasa ukuxhamla kwizigulane ezinama-cardiac arrhythmias ngokubanzi; iindlela ezikhuselekileyo kunye nezisebenzayo ezinjenge-cardiac pacing kunye nezinye izifo zonyango ziyafumaneka.
Kuye kwasetyenziselwa unyango lokubanjwa komzimba kwaze kwagqitywa unyango lwe-pacemaker. Nangona kunjalo, iingcali zichaza ukuba i-isoproterenol ayisisigxina sokhetho kwi-ACLS kwaye kufuneka iqwalaselwe kuphela kule nkqubo yokunyanga kwe-bradycardia ephawulekayo ukuba ingayithobeli i-atropine okanye ibe yinkqubo yesikhashana kuze kubekho unyango lwe-pacemaker olungasungulwa. Akufanele lusetyenziswe ukuvuselelwa kwezigulane ngokubanjwa kwintliziyo okanye i-hypotension ngenxa yemiphumo engabonakaliyo (umz., ukuxhalabisa kwe-ischemia, i-arrhythmias, i-peripheral vasodilation).
Akufanele ilawulwe kwizigulane ezine-bradycardias ezenziwe nge-acetylcholinesterase; nangona kunjalo, lunokuba luncedo kumanqanaba aphezulu kwi-bradycardia engabonakaliyo obangelwa yi-β-adrenergic blocking agents.
I-Isoproterenol hydrochloride dosayo
* Khetha umlinganiselo kunye nendlela yolawulo ngokuphendula kwesigulane kunye nemeko ethile yeklinikhi.
* Ukuqalisa unyango kwi-dose ephakamileyo kunconywa kwaye ukwandisa kancane, ukuba kuyimfuneko, ngelixa uhlola isigulane.
* Lungisa umyinge ngokwemigangatho yeklinikhi kunye ne-hemodynamic, kuquka intlawulo yenhliziyo, uxinzelelo oluphambili lwentlungu, i-systemic BP, kunye ne-urine output.
-Isoproterenol hydrochloride yezidakamizwa
I-Isoproterenol HCL (949-36-0) injection kunye ne-epinephrine akufanele ilawulwe ngokukodwa ngenxa yokuba zombini izidakamizwa zivuselela izifo zentliziyo kunye nemiphumo yazo edibeneyo inokubangela i-arrhythmias enzulu. Nakuba kunjalo, iziyobisi zingaphathwa ngokufanelekileyo zinikezelwa ithuba elifanelekileyo phakathi kweeyure.
Gwema i-ISUPREL xa i-anesthetics enamandla engalingani njenge-halothane iqeshwe ngenxa yokuba inokuthi ikwazi ukumelana ne-myocardium kwimiphumo ye-ammine sympathomimetic.
Isoproterenol hydrochloride I-Raw Powder
I-Isoproterenol Hydrochloride Marketing
Indlela yokuthenga i-Isoproterenol HCL kwi-AASraw